🥇 ▷ IPadkan cusub ee 11 wuxuu lahaan doonaa kuxigeen kale oo loo yaqaan "R1", maxay u isticmaali doonaan? ✅
IPadkan cusub ee 11 wuxuu lahaan doonaa kuxigeen kale oo loo yaqaan “R1”, maxay u isticmaali doonaan?
Waxaa lagu soo waramayaa in Apple ay qorsheyneyso inay ku biirto isuduwaha cusub ee taleefannadeeda casriga ah ee 2019. Magaceeduna waa “Rose” iyo “R1”.
Ilaa hada, shirkadda tufaaxa qaniinyada waxay adeegsatay magac xumo ka horreysa xarafka “M” sidaas darteed haddii aaladda mobilada ay ku soo degto processor-ka “A10” isuduwaha mooshinkiisa waxaa loogu yeeraa “M10”.
Laakiin tani waxay noqon kartaa mid isbeddela, oo waxaan ku dhowdahay inaan ogaano. Subaxnimadii hore Apple waxay u dabaal degi doontaa fureheeda soo jireenka ah ee Sebtember waxayna dunida u muujin doontaa moodhadeeda cusub ee iPhone. Xulashadoodu ma loogu yeeri doonaa R1?
Way ku xiisi kartaa | Maxaa qarinaya casuumada Apple ee farriinta iPhone 11?
Isu-duwayaasha Rose R1
Nooca gudaha ah ee macruufka 13 ayaa noo oggolaanaya inaan caddeynno caddeyn u qaadno tallaabooyinka ugu horreeya ee isuduwaha mooshinka Rose R1 (t2006). Waxay la mid tahay isuduwaha taxanaha “M” taxanaha, isagoo gacan ka geysanaya inuu macruufka ku wargaliyo halka ay iPhone ku taalo iyo halka ay ku soconeyso howlaha fulinta. Taasi waa, asal ahaan waa shey si gaar ah loogu talagalay inuu u shaqeeyo sidii hawlaha processor-ka ugu weyn ee dheeriga ah, taas oo kiiskan noqon lahaa Apple A13
Laakiin waxaa jira xoogaa farqi ah oo u dhexeeya R1 iyo isuduwayaasha taxanaha “M”. Iskaashatada Rose ayaa isku dhafan doona dareemayaal badan oo dheeri ah marka loo eego isuduwayaasha dhaqdhaqaaqa qarniyadii hore. Qaabkaan ayuu isuduwaha R1 wuxuu awood u yeelan doonaa inuu bixiyo sawir aad u sax ah oo ku saabsan halka ay iPhone ku taal. Xiriiriyaha hadda jira wuxuu ka ururiyaa xogta kombuyuutarrada, qalabka jimicsiga, xawaaraha loo yaqaan’romromospe ‘, barometer-ka iyo makarafoonnada.
Isu-duwayaasha Rose waxay yeelan doonaan dareemayaal taageeraya IMU, UWB, Bluetooth 5.1 howlo iyo raad raac indhaha ah kaamirada. Hadda waa inaan sugnaa oo keliya qodobka berrito oo aan ku ogaan doonno haddii xantaas la dhammaystiray. Gudaha iPadízate waxaan ka dhigi doonaa si ballaaran daboolida dhacdada, adiga ayaan ku sugeynaa.